10 | October | 2017 | Radio Himilo
10 faa’iido oo laga helo cunista Tufaaxa.
radio himilo October 10, 2017	Features, Wararka Leave a comment 63 Views
Muqdisho – Tufaaxu wuxuu kamid yahay qudaarta shacbiyadda leh – waana mid wax fiican. Waa qudaar ay ku cabaysan tahay faa’iidooyinka ay garbinayaan cilmi-baaris lagu ogaaday. Halkan waxaan idin kugu soo gudbinaynaa 10 faa’iido oo Tufaaxu leeyahay. Tufaaxa waxaa ku ...
radio himilo October 10, 2017	Features, Wararka Leave a comment 73 Views
Muqdisho – Ka fal-celinta tirada badan ee sigaarrada lacabo ee Amsterdam, laba farsamayaqaan ayaa la yimid qorshe Tukaha loogu tababbarayo ururinta haashashka lagu tuuro jidadka. Warshad yaqaan, Ruben van der Vleuten iyo Bob Spikman asal ahaan waxay tix-galinayeen inay adeegsadaan ...
Haween ku xayirmay garoon markii wejigooda laga aqoonsan waayay sawirrada dal-ku-galka.
radio himilo October 10, 2017	Features, Wararka Leave a comment 96 Views
Muqdisho – Sawirrada saddexda gabdhood oo Shiinees ah ayaa la sheegayaa inay ku xayirmeen gegida duyuuradaha Koofur Kuuriya, waayo baasaboorradooda ayaan si sax ah uga ekeyn wejiyadooda kadib markii qaliin-qurxin ay isku sameeyeen. Kuuriya waxay caan ku tahay qalliimada quruxda ...
UK – Danbiyada naceybka ee Muslimiinta ka dhanka ah oo kordhay.
radio himilo October 10, 2017	Features, Wararka Leave a comment 48 Views
London – Danbiyada naceybka ee ka dhanka ah Muslimiintu wuxu sare u kacay sanadkan, sida lagu sheegay baaritaanka Press Association. “Weerarada ka dhanka ah tira-yarta diimaha UK waxay noqonayaan joogto,” Diane Abbott ayaa u sheegtay Birmingham Mail. “Humuujka ka dhan ka ...
radio himilo October 10, 2017	Features, Wararka Leave a comment 34 Views
Muqdisho – Inta lagu jiro nolosha ka danbeysa qaangaarka, qeyb ballaaran oo waqtigeenna kamid ah waxaan ku bixinaa shaqada. Waaya’aragnimadeenna shaqada waa mid kamid ah siyaalaha go’aamiya badqabkeenna. Shaqaalaha iyo maareeyaasha waxay ku noqoneysaa lama huraan hubsashada badqabka sixo iyo ...